Sida loo doorto qalabka albaabka? eeg halkan
Dad badan ayaa shaki ka qaba marka ay iibsanayaan iyo rakibayaan qalabka albaabka. Sideen u dooran karaa inaan ku haboonaado cabbirka si fiican? Halkan, tusaale ahaan u qaado nidaamka qalabka albaabka lulidda aluminiumka ee uu sameeyay Shandong Yuqiang tusaale ahaan. Ka caawi inaad ka jawaabto shakiyadan. Qalabaynta badeecadaha Xeerarka qaabaynta ...
Codsiga nidaamka furitaanka korontada ee mashruuca
Sifooyinka furitaanka daaqadda silsiladda: 1. D-QDL furitaanka daaqadda silsiladda waa furitaan daaqad furan, oo ay fududahay in la rakibo; Dusha alaabtu waxay qaadataa geedi socodka buufinta fluorocarbon, heerka ilaalinta ayaa loo kordhiyaa IP32, kaas oo si wax ku ool ah u ilaaliya jawiga hawlgalka ee mot -ka muhiimka ah ...
Xarunta Waxbarashada Integrity Qinglianyuan ee Guddiga Jinan ee Kormeerka Anshaxa-Yale Hordhaca Mashruuca Furitaanka Nidaamka Korontada Korontada
Xarunta Waxbarshada Daacadnimada ee Jinan Qinglianyuan waxay xiriir la leedahay Guddiga Degmada Jinan ee Kormeerka Anshaxa ee Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha. Waxay ku taal waqooyiga qaybta bari ee Dalxiiska Wadada Waqooyiga, Degmada Licheng, Magaalada Jinan, dhanka galbeed ee Lianhuashan Heat S ...
Maxaan sameeyaa haddii qufulkii albaabka gacanku jabay?
Nolosheena maalinlaha ah, waxaan aaminsanahay in dad badan ay la kulmeen in carrabka wax -ku -oolka ahi uu ku dheggan yahay ama aan xayndaabka qufulka albaabkiisa la meerin karin. Haddii aad si lama filaan ah ula kulanto dhibaatadan oo kale, waxaan u baahanahay inaan ogaano sababta gaarka ah ee aan loo furi karin, ka dibna u qor dawada saxda ah ...
Farsamaynta badbaadada rakibidda ee alwaaxyada iyo daaqadaha aluminiumka ah Diyaarinta dhismaha
Diyaarinta farsamada Booska iyo cabirka albaabka iyo daaqadaha furitaankoodu waxay la jaanqaadayaan sawirrada dhismaha, waana in caddaynta farsamada loo sameeyaa sida waafaqsan shuruudaha dhismaha. Diyaarinta walxaha Tilmaamaha iyo moodooyinka albaabbada iyo daaqadaha aluminium ...
Maxay yihiin qodobbada aad fiiro gaar ah siineyso marka aad dooranaysid alwaaxyada alwaaxyada albaabbada iyo daaqadaha?
Markay timaado albaabada iyo daaqadaha aluminium, saaxiibo badan ayaa jecel oo neceb. Waxa ay jecel yihiin qaabku waa wanaagsan yahay oo ma xuma, waxa ay neceb yihiinna waa dalooladaha dabacsan ee daaqadaha. Gaar ahaan xilli -roobaadka, waxaa jira roob xoog leh oo bannaanka ah iyo roob aan badnayn oo guriga ah, dabayl xoog badan oo ka baxsan ...
Sida loo doorto xajmiga iyo qaabka xarkaha albaabada iyo daaqadaha?
Qof kastaa wuu fahmayaa shaqaynta laalaabyada. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah qaybaha qalabka, albaabada iyo daaqadaha lagama sooci karo suunka si caadi loo isticmaalo. Xirmooyinka yaryar waa inaan la dhayalsan. Albaabada iyo daaqadaha leh tilmaamaha kala duwan ee guriga, kaliya ma iibsan kartid hal cabbir. Waxaad u baahan tahay inaad ka ...
Faa'iidooyinka isticmaalka daaqadaha rogay
1. Hagaajinta hawsha hawo -gelinta Marka daaqaddu hoos u dhacdo, qolku si dabiici ah hawo uma yeelan karo, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah in hawadu qolka ka soo gasho daaqadda iyo dhinaca, oo aanay si toos ah ugu dhufan jidhka. Gaar ahaan marka farqiga heerkulka u dhexeeya gudaha iyo ...
Yuqiang Hardware-2019 Zhengzhou Expo Information Information Commercial Dhismaha
Laga bilaabo Ogosto 28 -keeda illaa 30 -keeda, 2019, Bandhigga Dhismaha Macluumaadka Ganacsiga ee Zhengzhou 2019 ayaa si weyn loogu qabtay Xarunta Shirarka iyo Xarunta Bandhigga Caalamiga ah ee Zhengzhou. Bandhigani wuxuu isu keenayaa sumcado si fiican loo yaqaan oo leh qaybo kala duwan oo ka mid ah warshadaha qurxinta naqshadda si ay uga qaybqaataan ...
Bandhigga 14 -aad ee Weifang China, Daaqadda iyo Daah -ka Wall Wall ayaa si guul leh loogu qabtay 2019
2019 Weifang Albaabka Shiinaha, Daaqadda iyo Daah-ka Wall Wall waxaa lagu qaban doonaa Weifang Lutai Convention and Exhibition Center May 16-18, 2019! Sannadkan, bandhigga ayaa si guul leh loogu qabtay kalfadhigii 14aad, oo si gaar ah u martigeliyay Albaabada Nidaamka Dhismaha Shiinaha iyo Isbahaysiga Windows, Quanlian Rea ...
Yuqiang ayaa daaha ka rogay Bandhigga 22 -aad ee Albaabka iyo Daaqadaha
Bishii Abriil 14, 2017, Shirka 22aad ee Albaabada Caaga Qaranka iyo Shirkadaha Sannadlaha ee Warshadaha Windows iyo Albaabbada Caagga ah, Daaqadaha iyo Bandhigga Alaabada la Xiriira ayaa si weyn looga furay Xarunta Shirarka iyo Xarunta Bandhigga Caalamiga ah ee Xi'an Qujiang. Bandhigan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay C ...
Yuqiang wuxuu soo bandhigayaa Fujian Aluminium ProfileStainless SteelDoor and Window Industry Exhibition
Bishii Janaayo 17-19, oo ay maalgalisay Fujian Gumei Metal Co., Ltd., “2016 Profile Aluminium Fujian/Stainless Steel/Door and Window Industry Exhibition” oo ay soo qabanqaabiyeen Qingdao Yuqiang Hardware CO., LTD ayaa si guul leh loogu dhammeeyay Nan'an Xarunta Bandhigga Caalamiga ah ee Guusha. ...